पेटको बोसो पगाल्नको लागि अत्यन्त लाभ दायक हुन्छ यी २ चिज, पाँच दिन भित्र देखिन्छ नतिजा ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/पेटको बोसो पगाल्नको लागि अत्यन्त लाभ दायक हुन्छ यी २ चिज, पाँच दिन भित्र देखिन्छ नतिजा !
पेटको बोसो पगाल्नको लागि अत्यन्त लाभ दायक हुन्छ यी २ चिज, पाँच दिन भित्र देखिन्छ नतिजा !
आजको समयमा मोटापा एक आम समस्या भएको छ। बच्चा बुढासम्म सबै मोटापाको समस्याले चिन्तित छन्। मानिस वजन घटाउनको लागि के-के सम्म गर्दैनन्। यस्तोमा एक सजिलो र सामान्य उपाय छ जसको प्रयोग गरेर तपाईं मोटोपना घटाउन सक्नुहुनेछ।
यी दुई प्रकारको ड्रिंकको प्रयोग गरेर तपाईं आफ्नो पेटको बोसोका साथै आफ्नो वजन कम गर्न सक्नुहुनेछ।
धनियाको दानामा खनिज, पोटेशियम, आइरन, मैंग`नीज, क्याल्सियम, फोलिक एसिड, भिटामिन ए, के र सी जस्ता तत्व प्रचुर मात्रमा समावेश हुन्छ। धानियको ड्रिंक तयार गर्नको लागि पहिला बेलुका एक चम्पा धनियाको बिउ पानीमा उमाल्नु`होस्। त्यस पछि, उमालेको पानीलाई केहि समयको लागि सेलाउन राख्नुहोस्। अब यसलाई रातभरि यसरी नै राख्नुहोस्। बिहान उठेर उक्त पानी राम्रोसँग छानेर खाली पेटमा पिउनुहोस्। ४ देखि ५ दिनमा यसको असर देखिन थाल्छ।
हाम्रो शरीरमा मेता बोलिजन रेट जति उच्च भयो त्यति नै वजन कम हुन्छ। जीराले शरीरमा मेताबोलिजम बढाउने काम गर्छ। साथै पाचन प्रणालीमा सुधार गर्न पनि जीरा निकै मद्दतगार हुन्छ। बोसो पगाल्नको लागि एक गिलास पानीमा राती एक चम्चा जीरा मिलाएर रातभरको लागि छोड्दिनुहोस्। र बिहान उठेर उक्त पानी छानेर खाली पेटमा पिउनुहोस्। यसले वजन कम गर्न मद्दत गर्छ।
३० बर्ष पुरानो ग्यास्टिक पनि तुरुन्तै निको पार्ने घरेलु ओेैषधी,रोग लाई पालेर ना राख्नुहोस होस ,नयाँ मोड लिन सक्छ हेर्नुस( भिडियो हेर्नुहोस् )
धेरै तातो पानी पिउनु पनि हुन सक्छ हारि`का`रक, निम्त्या`उन सक्छ यस्ता सम`स्या !